Fianarantsoa : Ny fiainan-tokantrano eo imason’ny lalàna
vendredi, 03 mars 2017 11:11
10%-n’ireo olona manao fitarainana ao amin’ny ivontoerana mandray ny tranga herisetra am-panambadiana eo Isaha no lehilahy. Ny ambiny kosa dia ny renim-pianakaviana manantona ao an-toerana noho ny fikasihan-tanana, ny herisetra ara-moraly sy ny tsy fanomezana vola ao an-tokantrano.
Manodidina izany indrindra dia tonga nizara ny boky nosoratany sy nampahafantatra izany teto Fianarantsoa ny fikambanana POT’EN CIEL Organizing. Boky mirakitra ny andinin-dalàna momba ny fiainam-pianakaviana izany. « Ny tokantrano Malagasy » no lohateniny. Natao io hetsika io mba ho filazalazana ny antsipirihany tsara ho fantatra momba ny lalàna mahasahana ny fanambadiana, ny fianahana, ny fandovàna, ny fisarahana, ny fananganan-jaza sns …
Ireo lehiben’ny fokontany sy ny fikambanana eo amin’ny fiarahamonim-pirenena no nisitraka ny fampafantarana. Nisy ny fakan-kevitra hoentina manatrika ny kaondoha nasionaly ho tanterahana ny 27 sy 28 martsa ho avy izao. Olona roa avy aty an-toerana no handray anjara amin’izany.
Tanjona lavitr’ezaka ny fandrafetana ireo hevitra hoentina ho sosokevitra fanatsarana ny lalàna misy momba ny tonkatrano sy ny fianakaviana eto Madagasikara. Notanterahina ny alakamisy 2 martsa teo ny atrikasa teo amin’ny foibem-paritra misahana ny mponina ao Isaha.